अस्ट्रेलियामा रहेको दूतावासलाई जग्गा किन्ने तयारी- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
पुस १३, २०७३ नारायण खड्का
अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको आग्रहपछि राजधानी क्यानबेराको कूटनीतिक क्षेत्र पारालुम्ला र डिकिनमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अस्ट्रेलिया सरकारले त्यस क्षेत्रमा रहेका जग्गालाई सरकारी चलनचल्तीको भाउमा बिक्री गर्ने गरी न्यूनतम ८ लाखदेखि २७ लाख डलरसम्मको जग्गाको प्लट खरिदका लागि आग्रह गरेको छ । त्यहीअनुसार दूतावासले नेपाल सरकारलाई अस्ट्रेलियाली सरकारले दिएको जग्गाको नक्सा, विवरण र रकम सहितको जानकारी पठाइसकेको छ ।
क्यानबेरामा रहेको दूतावास भवनका लागि सरकारले वर्षको २ लाख ४० हजार डलर (करिब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ) भाडा तिर्दै आएको छ । जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढे पनि दूतावाससँग भवन कहिलेसम्म निर्माण गरिसक्ने भन्ने कुनै योजना छैन । दूतावासका अधिकारीहरू भने अस्ट्रेलिया सरकारको नियमअनुसार पनि लामो समयसम्म घर नबनाई बस्न नमिल्ने भएकाले भवन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्ने दाबी गर्छन् । अस्ट्रेलियामा कूटनीतिक प्रावधानका लागि जग्गा खरिद गरिसकेपछि ३६ महिनाभित्रमा भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने र ७२ महिनासम्ममा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘सबै कुरा हामीले सोचेजस्तै भयो भने अबको करिब ६ महिनामा दूतावासले आफ्नो जग्गा खरिद गर्नेछ,’ कार्यवाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले आफ्नो भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ परराष्ट्रका एक अधिकारीअनुसार सन् २००७ मा पनि अहिलेका परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी कार्यवाहक राजदूत रहँदै आफ्नै जग्गा खरिदका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले आग्रह गरेको थियो ।
नेपालले आफ्नै जग्गा भएका कतिपय देशमा दूतावास भवन बनाउन सकेको छैन । दूतावास भवन भाडा जति पारदर्शी भनिए पनि त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा ‘कमिसन’ वा केही चुहावट हुने हुनाले नै पटकपटक दूतावास भवन नै सार्ने र कर्मचारी फेरिएसँगै निवास पनि फेरिने गरेको पाइन्छ । सरकारले दूतावासका लागि सम्पत्ति खरिद गर्न विगत चार वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि थाइल्यान्डबाहेक अन्यत्र खरिद हुन सकेको छैन । नेपालको विदेशमा ३६ नियोग छन् । तर कुनै मुलुकमा पनि आफ्नो पूर्ण निवास छैन ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७३ ०८:४०
प्रा. सुवेदीको किताब चिनियाँमा
पुस १३, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
लन्डन — बेलायतको लिडस विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीको किताब चिनियाँ भाषामा आएको छ । चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा दुई साताको प्रवचनका लागि आमन्त्रित सुवेदीको उक्त किताब हालै बेइजिङमा लोकार्पण गरियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतकी न्यायाधीश श्रीमती हानचिन सुएले उक्त किताब लोकार्पण गर्दै सुवेदीको कृतिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन र अध्यापनमा मौलिक आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । बेलायतस्थित अक्सफोर्डको हार्ट प्रकाशनले निकालेको सुवेदीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुन र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य विधाहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय’ किताब चीनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक झाङ लीले अनुवाद गरेका हुन् । लीले दुई वर्षको मेहनत लगाएर उक्त किताब चिनियाँ भाषामा ढालेका हुन् । चीनको सबभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहले उक्त किताब चिनियाँ भाषामा प्रकाशन गरेको हो ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७३ ०८:३७